मलेसियामा कोरोना भाइरसले आज पुनः ६ जनाको मृत्यु,आजमात्रै ६२९ नयाँ संक्रमित फ़ेला। - Malayakhabar
होम पेज मलेसिया विशेष मलेसियामा कोरोना भाइरसले आज पुनः ६ जनाको मृत्यु,आजमात्रै ६२९ नयाँ संक्रमित फ़ेला।
मलेसियामा कोरोना भाइरसले आज पुनः ६ जनाको मृत्यु,आजमात्रै ६२९ नयाँ संक्रमित फ़ेला।
क्वालालम्पुर ( मलेसिया ):= मलेसियामा कोरोना भाइरस ( कोभिड-19 ) ले संक्रमित हुनेको संख्या १८ हजार ७५८ जना पुगेको छन, भने संक्रमणको कारण अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १७६ जना पुगेको छ।
आज अक्टोबर १६ तारिख , शुक्रवारको दिन कोरोनाको कारण थप ६ जना नागरिकको मृत्यु भएसंगै जम्मा मृत्यु हुनेको संख्या १७६ जना पुगेको हो। आजमात्रै पुनः ६२९ जना नयाँ संक्रमित फ़ेला परेको मलेसियन स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। जम्मा संक्रमित मध्य आज २४५ जना निको भएसंगै जम्मा १२ हजार २५९ जनाले उपचार सकिएर स्वास्थ्य लाभ लिई निको भैइसकेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउछ।
हालसम्म ६ हजार ३२३ जनामा कोरोना संक्रमण सक्रिय रहेको छ , भने ९९ जना संक्रमित ईमर्जेन्सी कक्ष ( आईसियु ) मा भर्ना भएर उपचाररत रहेको तथ्यांकले देखाउछ।
अहिले कोरोना जोखिम उच्च रहेको ठाउँ क्वालालम्पुर , सेलाङ्गर , पुत्राजाया , केलाङ् र साबाह , साराबाह , लगायतकोमा कन्डिसनल एमसिओ कडाईका साथ जारी लागू गरिएको साथै ठाउँ ठाउँमा रोड ब्लक गरेर आवतजावत गर्नेहरुलाई चेकजाँचमा कडाइ गरिएको मलेसिया सरकारले बताईसकेको छ। एसओपि पालना नगर्ने हरु लाई कडा कारवाही गरिने समेत यहाँको सरकारले बताएको छ।
अघिल्लो लेख प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. बाबुराम भट्टराईको प्रतिप्रश्नः छानबिन गर्न कसले रोक्यो?
पछिल्लो लेख मलेसियाको जोहोर राज्य बाट सागर तमाङ बेपत्ता परिवार द्वारा खोजीको पहल ।